Indlela Yokupela Ummelwane Kuthetha Ntoni Ithetha Kwintsingiselo Yedikshinari- Indlela Yokupela. ulwazi
Indlela yokubhala ummelwane
Ummelwane Upelo oluchanekileyo
Omnye wemithetho esiya kuyinakekela ngelixa sibhala zizichazi. Izenzi ezichazayo mazibhalwe ngokwahlukeneyo okoko zenza igatya. Enye yezona mpazamo zixhaphakileyo kungenxa yokungaqondani kwamabinzana ezenzi zezichazi. Umzekelo: I-Alarm Clock kufuneka ibhalwe ngokwahlukeneyo, ingabi kufutshane. Kuba ezo mpazamo zihlala zenziwa, ulwazi kufuneka lufunyenwe kumthombo ngaphambi kokubhalwa.
Uthetha Ntoni Ummelwane?
Umbhala njani uMmelwane?
Isikhokelo sopelo esingummelwane
umntu ogcina umntwana